A Binding Force (Naruto) - ADL Magazine ➡
Otu ike agha (Naruto)
“A Binding Force” dezie
ぐ 力 (Tsunagu Chikara)
Boruto # 196 (Lelee Online)
Boruto Isi # 29
Toad nnyocha Usoro
"Btù Ike”(Akwụkwọ nsọ, Tsunagu Chikara) bụ ihe omume 196 nke Boruto: Naruto ndị na-esote anime.
Delta na -enwe nkụda mmụọ na ike Koji nwere ike ịbanye na Konoha n'ebughị ụzọ mee nzaghachi, n'ihi na nke ahụ na -ewepụ ya na nlekọta ya. N'ụlọ Uzumaki, Kawaki na -elegide anya na tube gluu Boruto nyere ya. Sarada na Mitsuki na -eleta Boruto, na -achọkwa ilele Kawaki. Sarada jụrụ Boruto ka Kawaki si dị, na -echeta oke iwe ya mgbe ya na Naruto nọrọ. Naruto bịarutere wee kwuo ka ọ yigharịa mkparịta ụka ya na Boruto maka ndị ọbịa. Boruto kwuru na ọ nweghị nsogbu, Naruto na -akpọkwa Kawaki ka ọ kirie. Boruto na Naruto bidoro ịgbawa, Kawaki matara mgbe Boruto na -eji clones ndò. Ọ na -agwa Boruto ka ọ na -eji Kama ugbu a, na -eme ka nke ahụ rụọ ọrụ ka Boruto na -arụ ọrụ na nzaghachi, ebe Boruto ka na -enweghị ike ịgbalite ya n'oge ọ bụla ọ chọrọ. Sparring maliteghachiri, Naruto na ndị na -ekiri ha abụọ na -ahụ mmụba nke arụmọrụ Boruto. Mwepụta ọkụ ọkụ nke Boruto dị ike nke ukwuu iji chụpụ otu n'ime klọọkụ onyinyo nke Naruto.
Boruto na -ejikwa aghụghọ kpuchie Naruto, mana emesịrị merie ya. Afọ ejughi ya maka arụmọrụ ya, mana Naruto toro ya maka ịlụ ọgụ karịa. Ha abụọ na -eme akara nkwekọrịta, nke Sarada na Himawari kọwaara Kawaki. Mgbe ọ na -agwa Mitsuki okwu mgbe e mesịrị, Sarada nwere mmetụta na -echeghị echiche maka ọganihu Boruto, wee kpebie isoro nna ya zụọ ka ọ mụta jutsu naanị ya nwere ike ime. Mitsuki nwere nchegbu maka ihe egwu dị na ike ndị a. Kawaki na -echeta mgba ọkụ Boruto na Naruto ma jiri ya tụnyere ọzụzụ mkparị nke ya na Jigen. Kawaki na -ajụ Naruto maka ọzụzụ ya na Boruto, Naruto na -akpọ ya òkù isonye n'oge ọzọ. Kawaki kwuru na ya enweghị ike iji chakra, na ọ bụghị shinobi, yabụ Naruto kọwara ya ụdị chakra. Kawaki na -ajụ maka clones ndò, na -ekwere na iji ha na -eti onwe ya ihe ka ọ bụrụ ụdị mmekpa ahụ nke nkụda mmụọ. Naruto na -adụ ọdụ megide ya, ebe o merela onwe ya n'oge gara aga, na -atụ aro inwe onye na -ama ya aka. Boruto nụrụ ka ọ na -ekwu, wee kpebie ime mkpesa gbasara ite ite ahụ ọzọ. N'ụlọ Uchiha, Sarada na Sasuke toro nri Sakura, Sarada rịọkwara nna ya ka ọ zụọ ya ka ọ mụta asụsụ Chidori. N'echi ya, Kawaki nakọtara akwa ite ahụ gbajiri agbaji wee kwadebe ka ejikọ ya ọnụ. Ọ bụ Koji hụrụ ya, onye jiri otu anya ya na -enyo ya enyo.
Hinata Uzumaki Nana Mizuki 樹 奈 々 Mizuki Nana
Sarada Uchiha Kokoro Kikuchi こ こ ろ Kikuchi Kokoro
Sasuke Uchiha Noriaki Sugiyama 杉山 紀 彰 Sugiyama Noriaki
Sakura Uchiha Chi Nakamura 村 千 絵 Nakamura Chie
Mitsuki Ryuichi Kijima 島 隆 一 Kijima Ryuichi
Echefula isoro ndị enyi gị kerịta ibe a na Facebook & Telegram! #Ike #Ike?
15 lita kwa 100km dị mma?
Kedu ihe bara uru KSI?